आफ्नै घर ढालेर बीमा दाबी गर्ने पनि यही समाजमा छन् : अर्थमन्त्री
नेपाल लाइभ बिहीबार, कात्तिक २१, २०७६, १८:३९
काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालका बीमा गर्ने कम्पनी, बीमक र बीमितलगायत बिमा क्षेत्रमा काम गर्ने सबैको तरिका सही नभएको धारणा राखेका छन्।
बिहीबार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको छैठौं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले बिमा गर्ने कम्पनीका नराम्रा काम धेरै सुनिने गरेकोमा पछिल्ला समय बिमा दाबी गर्न आउने बीमितले पनि विश्वास गुमाउँदै गएको बताएका हुन्।
‘आफ्नै घर ढालेर बिमा दाबी गर्ने जस्ता नैतिक पतन भएकाहरू पनि यही समाजमा छन्। त्यो नैतिक पतनको चरम रूप हो। बिमा व्यवसायीको पनि पारदर्शिता चाहिन्छ र बीमा समितिले पनि कडा हुनुपर्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने।
‘स्वार्थ बाझिने कुरा छ भने अर्थमन्त्री होस्, सचिव होस् वा बीमाका पदाधिकारी होस्, त्यस्तो कुरामा संलग्न हुनु हुँदैन। स्वार्थ बाझिने गरी काम भएको छ भने हामी छोड्दैनौँ,’ उनले थप स्पष्ट पार्दै उनले भने।
बीमा आफैंमा अलग सेवा नभएको र हरेक आर्थिक क्रियाकलाप, व्यवसाय तथा कर प्रणालीसँग पनि यो जोडिने उनले बताए। ‘बीमा कम्पनी लामो समय तलाउको पानी जस्तो भयो। अहिले बीमाको दायरा २०५ पुग्नु राम्रो हो। लघुबीमाले यसलाई बढाउन सहयोग गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ,’ खतिवडाले भने।
जोखिम न्यूनीकरण लागि मात्रै नभई व्यवस्थापनका लागि पनि बिमाको महत्त्व रहेको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले बिमा कम्पनीको दायरा विस्तार हुनु र पुँजी बढ्नु निकै सकारात्मक भएको बताए।
नेपालको हकमा बिमामो अर्थ बुझाईमा पनि भ्रम रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई छ।
‘बीमा कसकसले गर्ने हो? बैंक र सहकारीले बीमा गर्ने हो कि होइन? नागरिक लगानी कोषदेखि कर्मचारी सञ्चयकोष सम्म बीमा भन्छ। कुन बीमा हो कुन होइन छुट्याउन गाह्रो भयो,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने।
जोखिम व्यवस्थापनमा बीमा कम्पनीहरु आफै बढी सचेत हुनुपर्नेमा समेत अर्थमन्त्री खतिवडाले जोड दिएका छन्।
‘जोखिम व्यवस्थापनमा बीमा कम्पनी आफैंले गर्नुपर्छ। त्यसका लागि पुनर्बीमा आयो। ३०५ पुनर्बीमा नेपालमै गर्दा जोखिम व्यवस्थापन हुँदैन भन्ने तर्क सुनियो त्यसो भए हामीले विदेशबाट कति व्यवसाय ल्यायौं?, उनले भने।
बीमाका विषयमा सरकारले तय गरेका नीति नियम तथा कार्ययोजना लागु हुनुपर्नेमा पनि खतिवडाले जोड दिए। ‘बीमा समितिको अनुमति बिना बीमा गर्न पाइँदैन भन्ने कुरालाई पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ। सरकारले स्वास्थ्य बीमा अघि बढाउन खोजेको छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न कसरी सकिन्छ छलफल गरौं,’ उनले भने। सरकारले केही बीमाका योजनालाई आउटसोर्स गर्ने खतिवडाको भनाई छ।
बीमा क्षेत्रमा अब संख्यात्मक होइन सेवा विस्तार हुनु आवस्यक रहेको पनि उनको भनाइ छ। ‘हाम्रो मुलुकमा बैंक चलाउने र बीमा चलाउने पनि छन्। बैंकको बोर्डमा बसेर मेरै कम्पनीमा बीमा गर्नुपर्छ भन्नुहोला। त्यहाँ स्वार्थ त बाझियो। बैंक र बीमा कम्पनीबीच पातलो घेरा चाहिन्छ। हाम्रो चासो त्यति हो,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष महेश गुरागाइँले कम्पनीले छिट्टै सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्ने बताए। उनले यो वर्ष १० अर्ब प्रिमियम संकलनको लक्ष्य राखिएको बताए। चालू वर्षमा विदेशबाट १ अर्ब ५० करोड प्रिमियम संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको पनि उल्लेख गरे। (फाइल तस्बिर)
एमसिसीका विषयमा छलफल गर्न नेकपाले बोलायो सचिवालय बैठक
जसपाको पदीय भागबन्डा सहमति नजिक
एमसिसीका विषयमा छलफल गर्न नेकपाले बोलायो सचिवालय बैठक आइतबार, जेठ २५, २०७७
जसपाको पदीय भागबन्डा सहमति नजिक आइतबार, जेठ २५, २०७७